Mmelite Nmere n’ụlọ | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Home Mmelite
Mmelite ụlọ na-apụta
Mmelite Home kacha ọhụrụ
Naanị Mechie Franchise
Site na ngwa ahia di iche di iche iche di ime iji me ka ulo gi mara nma ka ubochi siri ike iji mezuo echiche niile. Ihe a niile na - enye aka na mmụba a na-ahụ anya n'ụwa niile n'oge na-adịbeghị anya gburugburu mpaghara mmezi ụlọ.
Differentdị dị iche iche na-emeziwanye ụlọ n'ụlọ
Mgbe ị chere maka mbido ụlọ ọ bụrụ na ihe ị na-eche banyere nhicha ọ dị nwute, ị hiere ụzọ. Ebe ọ bụ na franchising na-ahụ ọtụtụ ụdị ụlọ ọrụ ngwá ọrụ na azụmaahịa ngwaike na-aga na -eme ka ọfụma zuru ụwa ọnụ. Yabụ enwere ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche na-abanye na mpaghara niile mana ngwaike / nzụkọ azụmaahịa nke ụlọ ndozi ụlọ na-agbagharị.
Enwere ụdị aha ndozi ụlọ dị iche iche dịka:
Storelọ ahịa nchekwa na azụmaahịa ndozi ụlọ
Ndị ọrụ nhicha na nhichasị n ’ụlọ
Enwere ike ịgba ọtụtụ n'ime ha ka ọ bụrụ njikwa njikwa, nke pụtara na ị na - ejikwa ndị ọrụ, bụ ndị na - arụ ọrụ ndozi ụlọ.
Kedu ihe kpatara iji Franchiseek na-enyocha ohere iji nweta aha n'ụlọ?
Ana m akwado gị ka ị lelee ndekọ aha akwụkwọ mba ụwa nke na-enye ohere ịtụgharị aha franchise na-atọ ụtọ kemgbe 1998. Anyị na-enyekwa ohere dị iche iche nke aha franchise yabụ ọ bụrụ na ohere ụlọ anaghị esiri gị ike ịchegbu ebe ọ bụ na Franchiseek anyị na-ahụ na enwere ihe maka mmadụ niile.
KNOCKOUT Returns Boutique mgbatị ahụ maka ndị na - etinye ego - ndị isi ala dị n'ofe UK - ego dị ala: emeghe 9Round…